श्वेतासंग वि’वादपछि लाखौ खर्च गरेर सुष्माले आफ्नो जन्मदिन मनइन ,को को सहभागी भए त ? « Gaunbeshi
काठमाडौँ । नायिका सुष्मा कार्कीको हिज ज’न्मदिन परेको छ। १९८५ फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन उनको ज’न्म भएको थियो। बर्दिया जिल्लामा ज’न्मिएकी सुष्माले ‘मेरो एउटा साथी छ’
चलचित्रबाट चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन्।मो’डलिङ्ग हुँदै चलचित्रमा लागेकी उनले दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन्। चलचित्र क्षेत्रमा भने उनलाई निर्देशक सुदर्शन थापाले चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गराएका थिए। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुष्मालाई ह’क्की र नि’डर नायिकाको रूपमा समेत चिनिने गरिन्छ।
यस कारण उनी बेलाबेला विभिन्न कारणले वि’वादमा आइरहन्छिन्। हालसालै मात्र उनले आफू माथि काठमाडौंको ल’न्डन पबमा नायिका स्वेता खड्काकी बहिनी पत्रकार उत्सव रसाइलीले आफूमाथि कु’टपि’ट तथा गा’लीगलौज गरेको भन्दै प्र’हरीमा उ’जुरी दिएकी थिईन।
यद्यपी उनीहरुले सुष्मासंग मा’फी माग्दै वि’वाद टुं’ग्याएका थिए। उनै सुष्माले ज’न्मदिन धुमधामले मनाएकी छिन। उनले द’र्वार्माग एक कल्बमा से’लिबेसन गरेकी छिन, उनले आफ्नो साथीहरुलाई र केहि मि’डियाकर्मीहरुलाई पनि बोलाएकी थिइन्।
बलिउड अभिनेता धर्मेन्द्रका फ्यानका लागि आयो दुखद खबर,आईसीयूमा राखेर उपचार गरिदै
एजेन्सी ,बैसाख १९ । बलिउडका ‘हि म्यान’ भनिने दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्रको स्वास्थ्यलाई लिएर एउटा
गायक प्रमोद खरेल कार्यक्रममा जाँदा ठूलो दु,र्घटनामा परे …
काठमाडौँ । बहुचर्चित गायक प्रमोद खरेल दागंमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदै गर्दा सवारी
लामो समयपछि बोलीन् गायिका समिक्षा अधिकारी, भावुक स्टाटस लेख्दै भनिन् ‘तिम्रो लागि …….
काठमाडौं । गायिका समिक्ष अधिकारीले भाबुक स्टाटस लेखेकी छन् । उनको स्टाटसमा धेरैले विभिन्न खाले
काठमाडौँ । निर्माता छवीराज ओझालार्इ मातृशोक परेको छ । निर्माता ओझाकी ९९ बर्षीया आमा डम्बरकुमारी